JW Usoro Ihe Omume Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Mee 23-29, 2016
ABỤ ỌMA 19-25
“Amụma Ndị Kọwara Onye Bụ́ Mesaya”: (Nkeji 10)
Ọma 22:1—Ọ ga-adị ka Chineke ọ̀ hapụrụ Mesaya ahụ (w11 8/15 15 ¶16)
Ọma 22:7, 8—A ga-ekwujọ Mesaya ahụ (w11 8/15 15 ¶13)
Ọma 22:18—A ga-efe nza maka uwe Mesaya ahụ (w11 8/15 15 ¶14)
Ọma 19:14—Gịnị bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ amaokwu a na-akụziri anyị? (w06 5/15 19 ¶8)
Ọma 23:1, 2—Olee otú Jehova si bụrụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ? (w02 9/15 32 ¶1-2)
Ọgụgụ Baịbụl: (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) Ọma 25:1-22
Ozi Ụlọ n’Ụlọ: (Nkeji 2 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) bhs—Si n’ekwentị gụọrọ onye nwe ụlọ otu amaokwu Baịbụl.
Nletaghachi: (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) bhs—Jiri ebe e si achọ ihe dị́ na JW Library chọta amaokwu Baịbụl zara ajụjụ onye nwe ụlọ jụrụ gị.
Ọmụmụ Baịbụl: (Nkeji 6 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) bhs 139-140 ¶11-12—Ná nkenke, gosi onye ahụ ị na-amụrụ Baịbụl otú ọ ga-esi jiri JW Library na-akwadebe ihe unu ga-amụ.
“Otú E Si Eji JW Library Eme Ihe”—Nkebi nke 2: (Nkeji 15) Okwu ndị na-ege ntị ga-etinyetụ ọnụ. Kpọnye vidio ndị a: Otú Ị Ga-esi Adanlodu Baịbụl nakwa Otú Ị Ga-esi Achọta Ihe na Baịbụl Ma O Bụ n’Akwụkwọ. E kirichaa nke ọ bụla, unu ejiri nkeji ole na ole tụlee ya. Tụleekwanụ isiokwu nta ikpeazụ dị́ n’isiokwu bụ́ “Otú E Si Eji JW Library Eme Ihe.” Gwa ụmụnna ka ha kwuo ụzọ ndị ọzọ JW Library sirila baara ha uru n’ozi ọma.
Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ: (Nkeji 30) ia isi nke 16 ¶1-15
Abụ nke 139 na Ekpere
Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ na Mee 23-29, 2016
mailto:?body=Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ na Mee 23-29, 2016%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016169%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ na Mee 23-29, 2016